नेकपाको पोलिटब्युरोको टुंगो लाग्यो, पूर्वएमाले र माओवादीबाट को को परे ?
नेकपाको पोलिटब्युरोको टुंगो लाग्यो, पूर्वएमाले र माओवादीबाट को को परे ?
काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पोलिटब्युरो कमिटिको टुंगो लगाएको छ । पार्टीको १४७ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा तत्कालीन एमाले र माओवादीको कोटामा परेका सदस्यहरुको नाम टुंगो लागे पनि पार्टीको औपचारिक बैठक बसेर मात्रै सार्वजनिक गरिनेछ ।
अब प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि सचिवालय बैठक बसेर औपचारिक रुपमा पोलिटव्यूरो सदस्यहरुको नाम लिष्ट पारित हुने नेकपा स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली जेठ १ गते स्वदेश फर्किंदैछन् । सम्भव भएसम्म जेठ ३ गते पार्टी एकताको एक वर्ष पुगेका अवसरमा सबै काम सक्ने तयारी रहेको नेताहरुले बताए ।